DEG DEG:- C/raxmaan Xaaji oo si dirqi ah kaga bad-baaday isku day dil ay maleegeen ilaalada C/weli Gaas – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- C/raxmaan Xaaji oo si dirqi ah kaga bad-baaday isku day dil ay maleegeen ilaalada C/weli Gaas
Warar goordhaw nasoo gaaray ayaa sheegaya in taliyaha qeybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanle sare C/raxmaan Xaaji Abshir uu maanta ka badbaaday isku dil oo ay la maleegeen askar katirsan ciidanka ilaalada u ah madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas.
Ilaalada madaxweyne C/weli Gaas ayaa rasaas culus ku furay gaari uu la socday taliyaha qeybta booliska ee gobolka Nugaal Gaashaanle sare C/raxmaan Xaaji Abshir iyo sidoo kale ilaaladiisa.
Gaashaanle sare C/raxmaan Xaaji Abshir ayaa kamid ahaa wafdiga sii sagootinayay madaxweyne C/weli Maxamed Cali Gaas oo maanta ka dhoofayay garoonka diyaaraddaha, balse nasiib wanaag taliyuhu waa uu ka bad-baaday rasaastaasi.
Taliye C/raxmaan Xaaji Abshir ayaa markaasi kadib isaga haray wafdiga madaxweyne C/weli Maxamed Cali Gaas, wuxuuna taliyuhu ka baqay inay isku dhacaan ciidanka ilaaladiisa ah iyo ciidanka madaxweyne C/weli Gaas.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeysay oo ay ciidanka madaxweyne C/weli Gaas fal caynkaan oo kale ah ku kacaan, waxaa la xasuustaa in sanadkii hore askari ka tirsanaa ciidankaasi uu si bareer ah u dilay taliyihii hore ee saldhiga Waaberi ee magaalada Garowe Allaha u naxariistee Siciid Bakistaan, inkastoo markii dambe qisaas lagu fuliyay askarigii falkaasi dilka ah geystay.